SOM-J/Land-“Kisima”-Shirkii-Golaha Wasiirrada D/Dhexe Ee-SOMALIA Oo Go’aamo Laga Soo-Saaray!!…Warbixin Kooban…. | Allkisima.com
Waxaa Qoray Admin on Jul 13th, 2017 and filed under Wararka Somaliya. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry
Kismaayo🙁Allkisima)_Shirkii Golaha Wasiirada ee X.F.SOMALIA oo uu shir-guddoominayey R/Wasaare Xasan Cali Khayre ayaa lagu qabtay magaalada kismaayo iyadoo warbixin laga dhageystay hoggaanka Maamulka kismaayo ka jira xilligan lagana soo saaray awaamiir dhanka amniga ah, laguna ansixiyey Sharciyada Waxbarashada Guud ee dalka iyo kan Saxaafadda.
Haddaba R/Wasaaraha oo furay Shirka ayaa ka codsaday Mr-Axmed Madoobe inuu warbixin ku aaddan xaalada guud ee J/land ka siiyo Golaha Wasiirrada.codasiga ka dib mr-Axmed madoobe Ayaa uga mahadceliyey R/Wasaaraha iyo xukuumada tallaabada geesinimada leh oo ay shirkoodii caadiga ahaa ugu qabsanayaan Kismaayo.,sidoo kale Mr-Axmed Madoobe ayaa ka warbixiyey marxaladaha ay soo mareen ka maamul ahaan iyo sida ay hay’adaha dowliga ah u dhiseen wixii caqabdo jireyna ay uga soo gudbeen, maantana ay ka fikirayaan sii horumarinta amniga, iyo u adeegista bulshada. Golaha Wasiirrada ayaa warbixin kooban ka dhageystay hay’adaha amniga magaaalda kismaayo oo ka warbixiyey xaaladda amniga, xogaha ay ka hayaan cadowga, qorsheyaasha u degsan ee la dagaalanka argagaxisada.
Sidoo kale Wasiirka Amniga dalka Mr-Maxamed Abukar Islow (Ducaale) ayaa golaha siiyey warbixin ku aaddan sidii amniga loo sii xoojin lahaa oo kooxaha argagaxisada ah cadaadiska ay ku hayaan bulshada looga joojin lahaa. Warbixin dheer ka-dib golaha wasiirradu waxey go’aamiyeen in cid allaale iyo cidii lagu helo inay taageerto argagaxisada ha noqoto dhanka maaliyada, siyaasada iyo niyadaba in tallaabo sharci ah laga qaadi doono, haddana ay jiraan shaqsiyaad lagu raad joogo.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka & Dalxiiska Mr-Yarisow ayaa Golaha horgeeyey Xeerka Saxaafadda oo wax-ka-bedel lagu sameeyey qoddobo ka mid ah, kana warbixiyey xaaladaha uu soo maray iyo wadatashiyada ballaaran oo ay la yeesheen M/Goboleedyada, suxufiyiinta Soomaaliyeed, bulshada rayidka ah, hay’adaha caalamiga ah sida SMSG, UNSOM, IMS/FOJO, iyo kuwo kale. Golaha Wasiirrada ayaa ansixiyey Xeerka Saxaafada oo muhiimad gaar ah u leh suxufiyiinta Soomaaliyeed iyo hourmarinta warbaahinta dalka.
Wasiirka Waxbarashada Mr-C/raxmaan Daahir Cusmaan ayaa isagana golaha horkeenay Sharciga Waxbarashada Guud ee dalka oo ahmiyad gaar ah u leh horumarinta waxbarashada dalka. Golaha Wasiirada ayaa ansixiyey Sharciga Waxbarashada Guud.
Golaha Wasiirada ayaa sidoo kale maanta u codeeyey oo ansixiyey xaquuqda M/xweynihii hore ee SOMA;LIA Mudane Xasan Sheekh Max’ud oo go’aanka golaha wasiirada loo gudbin doono M/weynaha DF-SOMALIA Dr-Maxamed C/llaahi Max’ed Farmaajo si uu dekreeto uga soo saaro. Dastuurka ayaa u oggolaanaya in M/weynihii hore oo xilka si nabad ah ku Wareejiyey uu yeelanayo xaquuq isaga iyo qoyskiisa ah.
Ugu danbeyntiina R/Wasaaraha ayaa sheegay ahmiyada doorashooyinka dalka 4ta sano ee soo socoto, kana codsaday wasiirrada in la diyaariyo dhammaan qorsheyaasha lagu hubinayo in loo diyaar garoobo doorashooyinkaas. R/Wasaaraha ayaa guddi heer wasiir ah u magacaabi doona dhowaan si loo dar-dargeliyo barnaamijka doorashooyinkooda.